‘ससुरालीलाई प्रत्येक महिना ३३ हजार दिन्थेँ अब झन माग बढाए-थेग्न सकिन’ भन्दै युवकले जिवन त्यागे ? – Sandesh Press
‘ससुरालीलाई प्रत्येक महिना ३३ हजार दिन्थेँ अब झन माग बढाए-थेग्न सकिन’ भन्दै युवकले जिवन त्यागे ?
October 7, 2021 169
एजेन्सी :- ससुराली परिवारको एक अंश हो । समस्या र अप्ठेरो परेको बेलामा परिवारको सहयोग चाहिन्छ । सहारा नै परिवार हुन्छ । विवाह भनेको दुई परिवारबीचको स म्ब न्ध हो । तर विवाहकै कारण एक पुरुषले भने जीवनत्या,’ग गरेका छन् । ससुरालीको माग पुरा गर्न सकिन अब त अति भयो भन्दै एक पुरुषले यस्तो निर्णय गरेका हुन् । यो घटना भारत, हरियाणाको पानीपत जिल्लाको हो ।
युवकले भनेका छन्, ‘म मेरो ससुराली पक्षका मानिसहरुलाई लगभग ८ बर्ष सम्म हरेक महिना झण्डै ३२ हजार रुपैयाँ दिइरहेको छु, तर अब यी मानिसहरुको माग बढेको छ, जुन म पूरा गर्न सक्दिन् ।’ त्यती भनेपछि ति युवकले रेलको अगाडि दौ,’डिएका छन् ।बागमती प्रदेश सरकारले कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरेर बागमती प्रदेश भित्र चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कात्तिक पहिलो सातादेखि लागू हुने गरेर २३ प्रतिशत भाडा बढाएको हो ।
Prevहार्दिक बधाई : भारतको सिक्किममा नेपाली भाषालाइ राष्ट्रिय भाषा घोषणा
Nextदशैं तिहारमा बैंक तथा सेयर बजार बन्द,हेर्नुहोस कहिलेदेखि कहिले सम्म ?